crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Wax ka baro Fardaha | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna December 7, 2016	0 5,632 Views
Muqdisho (Himilonews) – Farduhu waa gamaanka jaad kamid ah oo sida Dameerka aan loogu dow-gelin adeegsi joogto ah iyo rarasho. Muuqaalkiisa il-qabadka leh iyo awooddiisa xawaare ee uu 40-48km saacadiiba socon karo, ayaa Faraska ka dhigay inuu kusoo baxo bahda gamaan midka loogu majeersi badan yahay. Iyada oo mar laga eegayo xowligiisa iyo orodkiisa xawaaraha leh, Fardaha waxaa baryadii hore lagu gali jiray dagaallada – maantase doorkaas waxaa badalay in lagu galo tartamada siiba dunida Carabta meelo kamid ah oo tartamo loo qabto fardooleyda. Mar kalana, siiba waayadan danbe iyo marar qaar nolosha maanta, fardaha waxaa loo adeegsadaa in lagu galbiyo aroosyada iyo fantasiyada qaar. Tani waxay inta badan ka dhacdaa goballada qaar ee dalka.
Cimriga Fardaha wuxuu noolaan karaa inta u dhaxeysa 25-30 sanadood. Sidka uu caloosha ku sido ilmahana waxaa loo shin-tiriyaa 11-12 bilood ama hal sano. Culeyskiisuna waa culaab u dhaxeysa 380 kg iyo 1000kg. Halka dhirirkiisuna uu yahay 1.4 mitir ilaa 1.8 mitir.
Labkiisa waxaa la yiraahdaa Faras. Halka tiisa dhedigta ahna lagu magacaabo Geenyo. Si lamid ah Dameerka ayaa dhaqashadiisa Insaanku bilaabay qarniyo iska daba dhow. Ci’da Fardaha waxaa loo yaqaan Danan. Dadka ku fogaaday fuullaanka iyo jara-barista iyo si guud dhaqashadiisa waxaa lagu magacaabaa Fardooley.
Caadada ay kawada siman yihiin ka reer Gamaan ahaan waa inay sara-joog iyo sal-fadhiba ku hurdaan. Ku dhawaad saddax saacadood oo kala tagsan daqiiqado ahaan ayuu maalinkii hurdaa Farasku.
Saandkii 2008, hey’adaha beeraha ee FAO ayaa sheegtay in Fardaha dunida ku nool ay gaarayaan 59- malyuun. Xog ururin laga sameeyey 73 dal sanadkii 2004, ayaa lagu ogaaday in Farasku uu yahay noolaha afaraad ee dadku jecleystaan inay hanti ahaan u helaan.
Dalkeenna, in kasta oo aan la heynin tiro koob sax ah oo lagu ogaado tirada fardaha ku nool, hadana dhaqashada Farduhu ma ahan sidii hore. Dadka oo nolosha magaalada la qabsaday awgeed iyo adeegsiga baabuurta ayaa loo aaneynayaa hoos u dhac kasta oo ku yimid Gamaanka siiba Fardaha.
Baxdow waa faraska fardaha ugu dheereeya. Faraska aan la lahayn ee inta la fuulo lala cararo waxaa la yiraahdaa Kudaal. Dabada Gamaanka waxaa la yiraahdaa Qanaan. Jaadadka fardaha waxaa kamid ah Bullaale oo ah faras midabkiisu bullo yahay iyo Xamar. Faraska la dhufaano waxaa la yiraahdaa Senge. Qaababka loo fuulo Faraska waxaa kamid ah Leeddo-fuul iyo Beersaar.
Neefka Gamaanka dhedigta ah marka ay kudaal u baahan tahay waxaa la yiraahdaa Beeddal.
Hal-ku-dhigyadii laga yiri Fardaha waxaa kamid ah;
Faras in la fuulo mooyee, faalo kale maleh.
Fardo la isku hayo, layskuma faansho.
Faras nimaan lahayn in la isku fuushan yahay buu moodaa.
Qore: Zakariya Xasan ‘Hiraal’.
Previous: Wax kabaro Dameerka
Next: Wax ka baro Baqasha
La kulan: Ninka guri ka yeeshay diyaarad dhexdeeda muddo 15-sano ah
New Zealand badan oo qaadanaya diinta Islaamka.